လူအချင်ချင်းလှည့်ဖျားခြင်းကင်းဝေးကြပါစေ။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာစာအုပ်မှအဓိပ္ပာယ်မဲ့ စွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်း။(ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။) …
Posted by danyawadi on January 19, 2013 in Articles, News,
ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ။ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ စာအုပ်မှ အဓိပ္ပာယ် မဲ့ စွပ်စွဲချက်များ ကို ဖြေရှင်းခြင်း။ သင်ဟာ လူသားပီသသောစိတ်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် သူတပါးကို မဝေဖန်ခင် အမှန်တရား ကိုလေ့လာကြည့်ပါလေ။ နာလည်မှူလွဲမှား မှူများ အတွက် တစ်ခါလောက်ဖတ်ကြည့်စေလိုပါသည်။
လေးစားချစ်ခင်အပ်ပါသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ –
ဤကမ္ဘာပေါ်မှာ အတူတူနေကြတဲ့ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ အသားအရောင်၊ ယုံကြည်ချက်မရွေး ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံးအပေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က ‘အတ်စလားမ်မု အလိုင်းကွမ်း(မ်)’ (ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အပေါင်း၊ အသင်တို့အပေါ်ကျရောက်ပါစေလို့) နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။
ယနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်သေပြချက်မရှိ၊ အထောက်အထားမရှိပဲ တစ်ဖက် သတ်ဆန်စွာ၊ ရိုင်းစိုင်းစွာ၊ စွပ်စွဲထားတဲ့ စွပ်စွဲချက်များဟာဆိုရင် တည်ငြိမ် မှုပျက်ပြား အောင် အေးချမ်းသာယာမှု ပျက်ပြားအောင် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအကြားမှာရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြိုကွဲအောင် အကျိုးပျက်စီးအောင် တမင်ကြံဆောင် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတဲ့ သဘောကိုသက်ရောက်နေပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး၊ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ နေထိုင်နေကြတာကို မနာလို၊ မရှုစိမ့် တဲ့သဘော မျိုးဆန်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်နေတာကို ညီညွတ်ရေး ပျက်ပြား ပြီး အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ပြီး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုကို ဦးတည် ရည်ရွယ်နေပါတယ်။
အမှန်တကယ်မှာတော့ သဘောထားရိုးဖြောင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိစွပ်စွဲချင်တာ၊ မိမိသိချင်တာတွေကို သမိုင်းပညာရှင်တွေ အစ္စလာမ်ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးအရင် ဆုံးမေးမြန်း ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ အမှန် တကယ်ဖြစ် ခဲ့ရင်တောင် ဒီလိုအနိဋ္ဌာရုံတွေ နောက်နောင်ကိုမဖြစ်ရလေအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတာကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ စိတ်စေတနာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းစွာ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမ၊ ဂျူးဘာသာ ရဲ့အဆုံးအမ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ် ထိုက်တာ ကို ကျောခိုင်းမျက်ကွယ်ပြုပြီး မှတ်ပုံတင်အမှတ်မပါ နေရပ်လိပ် စာအတိအကျမပါပဲ ကိုယ် ထင်ရာတွေကို ကိုယ်စွပ်စွဲရေးသားပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်မယူရဲတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို Online ပေါ်မှာဖြန့်နေတာကိုက သူရဲ့ မူလစိတ်ရင်းမှန်ကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီလို မတော်တရော်ဖန်တီးပြီး Online ပေါ်မှာဖြန့်နေတဲ့ “Islamization” ပြုလုပ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့သတင်းမှာကြီး ကိုတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ အတူတကွပူးတွဲနေထိုင်ရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလိုလားတဲ့ ကျွန်တော်တို့မွတ်စ လင်မ်လူငယ်တွေကတော့ အထောက်အထားများနှင့်တကွ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ အများပြည် သူတွေအနေနဲ့ အဖျက်သမားတွေရဲ့ ပယောဂထဲကို အငိုက်မမိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ရဲ့ နေပုံ၊ ထိုင်ပုံ၊ ပြောပုံ၊ ဆိုပုံတွေကို ပြန်လည် သတိပြုသုံးသပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီးဖြေရှင်းတုံ့ပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Islamization ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ပရ၀ုဏ်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ ဝေါဟာရအရလည်းကောင်း၊ အနက်သဘောအရလည်းကောင်း မရှိတဲ့စကားလုံး၊ အသုံးပြုခြင်းမရှိတဲ့ စကားလုံးပါ။ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ ငြိမ်းချမ်း ခြင်း၊ အမိန့်နာခံခြင်း ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ သူတစ်ပါးအပေါ်လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူခြင်း၊ ဖိနှိပ်ကျွန်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး တွေ မဟုတ် ပါ။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တောင် စစ်မှန်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အတော်ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာ သူတစ်ပါး ကိုပါ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အတော်ကြိုးစားနေရတဲ့အချိ်န်မှာ သူတစ်ပါးကိုပါ အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ အတင်းယုံကြည်ဝင်ရောက်ဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ရေးဟာ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စပါ။ အစ္စလာမ်ကို ဒီလောက်တော်ကြောက်ကန် နေမယ်ဆိုရင်တော့ မိုးပြိုမှာကိုအတိုင်း မသိကြောက်ရွံ နေတဲ့ သတ္တ၀ါငယ်ကလေး တစ်ကောင်လိုများ ဖြစ်နေပါပြီလား။ စားမ၀င်၊ အိပ်မပျော်နဲ့ အကြောက်လွန်ခြင်းဟာ မိမိကိုယ်မိမိဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာတရားကမျှ အခြားဘာသာတရားကို ကြောက်လန့် စေဖို့ချောက်လှန့်မထားပါဘူး။ တိုက်ခိုက်တော်လှန်ဖို့လည်း လမ်းမညွှန်ထားပါဘူး။ ဘာသာ တရား တစ်ခုကို ယုံကြည်သက်ဝင် ခြင်းဟာ စိတ်အေးချမ်းသာယာခြင်း၊ သောကကင်းဝေးခြင်း၊ လူသားတွေအပေါ်မှာ ညှာတာထောက်ထားခြင်း ကိုပဲဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာတရားအပေါ်မှာ ကိုယ်ကခိုင်ခိုင် မာမာ သံဓိဋ္ဌာန်ချပြီးယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်အတွက် ဘာကိုမျှဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါသည် ငါ့ဘာသာတရားအပေါ်အမှန်တကယ် ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပြီးလား လို့မေးခွန်း ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ(၉၉)ရာခိုင်နှုန်းမှာ စစ်တပ်ရှိပါတယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာက လက်နက်ကိုင်ထားတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကျူးကျော် ရန်စလာမယ်ဆိုရင်တော့ လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို လူသတ်ဂိုဏ်းဖွဲ့ ထားပါတယ်လို့ စွပ်စွဲမလား။ အေးချမ်းစွာ နေလိုသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်လာမယ် ဆိုရင်တော့ သတိပေးမယ်။ ဆက်ပြီးကျူးကျော်မယ် ဆိုရင်တော့ လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာကို ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံးက တစ်ညီ တစ်ညွတ်တည်း လက်ခံထားပါတယ်။ ဒီလိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ရတာကို လူ့အသက်သတ်တဲ့အတွက် အပြစ်(Sin)ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးလူမိုက် အကြိုက်လိုက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးမလို့လား။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ အစ္စလာမ်အယူဝါဒပြန့်ပွား ရေးအတွက် အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတွေကို သတ်ပစ်ရမယ်။ ဒါမှကုသိုလ်ရပြီးကောင်းကင်ဘုံကို ရမယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဟာ ဘယ် အပေါ်မှာ အထောက်အထားပြု အခြေခံထားသလဲ။ ဒီစွပ်စွဲချက်မှန်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေမှာ လက်နက်တိုက် ကြီးတွေ လက်နက်စက်ရုံကြီးတွေ အဆမတန်ကြီးမားတဲ့ စစ်သည် အင်အားတွေ အဆမတန်မြင့်မားလှတဲ့ စစ်အသုံးစရိတ်တွေ ဆောက်လုပ်သုံးစွဲမှာပေါ့။ နျူကလီးယားဗုံးတွေထုတ်ပြီး မွတ်စလင်မ်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြဲချလိုက်မှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တွေထဲမှာ လက်နက်တိုက်ကြီးတွေ လက်နက်စစ်ရုံကြီးတွေ စစ်သည်အင်အား အကြီးအကျယ်ထူထောင် နေတာတွေ အခြားနိုင်ငံ အပေါ်အနုမြူဗုံးချခဲ့တာတွေဟာ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေလား။ အခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေလား ဆိုတာ တစ်ချက်လောက်စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦး၊ ဘာမှမသိပဲ မွတ်စလင်မ်ကိုမုန်းတီးရုံမျှနဲ့ မစွပ်စွဲလိုက်ပါနှင့်။
မွတ်စလင်မ် တွေဟာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုလည်းကောင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က စေလွှတ်တဲ့တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်ကိုလည်းကောင်း မိမိတို့ရဲ့အသက်ထက်ပိုချစ်တယ် ဆိုတာဟာ မှန်ပါတယ်။ ဒါအထူးအဆန်း တစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုချစ်ကြောက်ရိုသေမှာပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ ယေရှုသခင်ကို ချစ်ခင်မှာပါ။ မွတ်စလင်တစ်ဦးရဲ့ အသက်ဟာကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်ဖြစ် သလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးရဲ့ အသက်ဟာပိဋကတ်သုံးပုံ ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ၀င်တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ဟာလည်း (BIBLE) သမ္မာကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘာသာရဲ့ကျမ်းကမှ ကိုယ့်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူကို သတ်ဖြတ်ပစ်ရမယ်လို့ မညွှန်ကြားထား ပါဘူး။
အကယ်၍ ဦးနှောက် ရှိမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူမှန်သမျှ ကိုသတ်ပစ်ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း(၆၀၀၀)မှာ မွတ်ဆလင်မ်လူဦးရေက သန်း(၂၀၀၀) လောက်ပဲရှိတာ။ ဒီလူဦးရေ သန်း(၂၀၀၀)က ကျန်လူဦးရေ သန်း(၄၀၀၀)ကို သတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတာ အရူးတစ်ယောက်တောင်လက်မခံနိုင်တဲ့ အဆိုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်တော့ပြောဖို့ လိုပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူတွေ ကိုသတ်ပစ်ရမယ်လို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ပြောထားသလဲ။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကလက်ခံထားတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းဟာ“လူသတ်ကျမ်း”လို့စွပ်စွဲလိုက်တာဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုစော်ကား လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစွပ်စွဲစော်ကားသူဟာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ် သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် သူယုံကြည်ကိုး ကွယ်နေတဲ့ ဘာသာတရားကသူ့ကို ဒီလိုပဲတစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲဖို့ ညွှန်ကြားနေပါသလား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူကိုယ် တိုင်က စိတ်ကျရောဂါ(သို့မဟုတ်) စကီဇိုဖရီးနီးယားလို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားနဲ့ ရူးသွပ်နေသူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ လူသတ်ဖို့မပြောနဲ့ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ သက်ရှိတစ်စုံတစ်ရာကို တောင်သတ်ဖြတ်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။ ဒီအချက်ကို ကုရ်အာန်အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြပါ ရစေ။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် (ကဏ္ဍ ၁၇း ပါဒတော် ၃၃)တွင် “ သင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသော မည်သည့်သက်ရှိတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှ ခိုင်လုံ သောအ ကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင်ခြင်း မပြုကြလေနှင့်။ မတော်မတရား သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင် ခံရသူဘက်မှ လိုက်ပါအရေးဆိုနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာကို ငါအလ္လာဟ် အရှင်မြတ် စီမံပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အဆုံး စီရင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယေက်ကမျှ တရားမျှတမှု ကိုကျောခိုင်း၍ အလွန်အကျွံ လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ခြင်း မရှိ ပါစေနှင့်။ ဧကန်အမှန်ပင် မတော်မတရားဖိနှိပ်သတ်ဖြတ် ခံရသူ တစ်ဦး အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်သည်။” (၁၇း၃၃)
ရှင်းလင်းချက်။ ။ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အားသာချက်ရှိနေသူတို့က အားနည်းချက်ရှိသူတို့အား ဖိနှိပ်ရက်စက်နေခြင်းက တရားမျှတမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းရက်စက်ခြင်း၊ လူမဆန်ခြင်း အစရှိသည့် လက္ခ ဏာ များ ကို ရည်ညွှန်းပြသလျက် ရှိသည်။ မိမိတို့၏အားသာချက်တစ်စုံတစ်ရာကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ တစ်ဖက်သားအပေါ် ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည် လိမ္မာယဉ်ကျေးသော လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ကိုယ် စားပြု သော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်က တိုးတက်သော လိမ္မာယဉ်ကျေး သော လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ထူထောင်နိုင်ရင် အဓိကကျသော အခြေခံအချက်အလက်များတွင် တရားမျှတမှု ရှိခြင်းက လည်းအခြေခံအချက်တစ်ရပ်အဖြစ်ပါဝင်လေသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က တိကျမှန်ကန်စွာတရားစီရင်ခြင်းမရှိဘဲ လူသားတစ်ဉ်ီးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှေင့်ခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ သေဒဏ်ပေးခြင်းတို့ကို လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်လုံးအပေါ် ကျူးကျော်စော် ကား ခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားလေ သည်။ ကုရ်အာန် (၅း၃၂)တွင် “ဘနီအီစ်ရာအီးလ်” မျိုးနွယ်များကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားလေသည်။
“ဧကန်အမှန်ပင် မည်သူမဆိုလူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်အား အသက်တစ်ချောင်း၏ အစားမဟုတ်သလို တိုင်းပြည်၌ ဆူပူသောင်းကျန်းနေခြင်းလည်းမဟုတ်ဘဲ သတ်ဖြတ်အဆုံး စီရင်ခဲ့ပါလျှင် လူသားထုတစ်ရပ်လုံး အား သတ်ဖြတ်အဆုံးစီရင်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် မည်သူမဆိုလူသားတစ်ဦး၏ အသက်ရှင်သန်ရေးကို ဖေးမကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လူသားထု တစ်ရပ်လုံးအား ဖေးမကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။” (ကုရ်အာန် ၅း၃၂)
အစ္စလာမ်က တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာကို တိကျမှန်ကန်စွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ပြဋ္ဌာန်း လျက်ရှိသည်။ မတော်မတရား ဖိနှိပ်စော်ကားခံရသူဘက်မှ ရပ်တည်အကာအကွယ် ပေးကြရန် ကိုလည်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထား လေသည်။ အလားတူတရားစီရင်ရာ၌ တစ်ဖက်စောင်းနင်းပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ် မမျှတစွာ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အဂတိတရားလေးပါး လက်ကိုင်ပြု၍ တစ်ဖက်သတ် အလွန်အကျွံဖိအားပေး၍ အမိန့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းတို့ကို လုံးဝမပြုလုပ်ရန် တားမြစ် ထားလေသည်။ ထိုသို့ ပြုခဲ့ပါမူ “တရားကိုနတ်စောင့်သည်” ဟူသော ဆိုရိုးစကားကဲ့သို့ပင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မတော် မတရား ဖိနှိပ်ခံရသူတို့ဘက်မှ ရပ်တည်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေး သတိပေးထား လေသည်။
တစ်ဖန် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် (၄၂း၄၁၊ ၄၂း၄၂၊ ၄၂း၄၃)တို့၌ ဖိနှိပ်ခံရသူတို့၏ လက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ ဖိနှိပ်သူတို့၏ပြစ်ဒဏ်နှင့် ပတ်သတ်၍လည်းကောင်း၊ ဖိနှိပ်ခံတို့၏ သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လည်းကောင်း အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားလေသည်။
“မည်သူမဆို မ်ိမိသည် မတရားဖိနှိပ်စော်ကားခံခဲ့ရသည့်အပေါ် (မိမိခံစားရသည်နှင့်အညီ) ပြန်လည်လက်တုံ့ပြန်ခဲ့ လျှင်ယင်းကိစ္စသည်တစ်စုံတစ်ရာ ပြစ်တင်ဖွယ်ရာမရှိပေ။”(ကုရ်အာန် ၄၂း၄၁)
“အမှန်တကယ်မှာမူ အမှန်တရား၊ သစ္စာတရားကို ကျောခိုင်း၍လူသားထုအပေါ် မတော်မတရားဖိနှိပ်ရက်စက်နေကြ သူများ၊ တိုင်းပြည်အတွင်း၌ ဆူပူသောင်းကျန်းနေသူ များအပေါ်၌ သာမူ ဝေဖန်ပြစ်တင် ရှုတ်ချဖွယ်ရည် ဖြစ်သည်။ သူတို့အတွက် ပြင်းပြနာကျင်ဖွယ်ရာသော ပြစ်ဒဏ်များရှိလေသည်။”(ကုရ်အာန် ၄၂း၄၂)
“သို့ရာတွင်အကြင်သူတစ်ဦးသည် (မိမိမတရားစော်ကားခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍) သည်းခံခွင့်လွှတ် သင်ပုန်းချေခဲ့မည်ဆို လျှင်ဧကန်အမှန်ပင် ယင်းသို့သောပြုမူဆောင်ရွက်ချက်သည် အရေးအရာကိစ္စရပ်များကို နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားသမှုပြုပြီး ခိုင်ခိုင် လုံလုံ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်နိုင်မှုတစ်ရပ်သာလျှင်ဖြစ်သည်။” (ကုရ်အာန် ၄၂း၄၃)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က မတရားဖိနှိပ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လျော်ညီသော လက်တုံ့ပြန်မှုကို ခွင့်ပြုထားသောလည်း ရေရှည်အကျိုးတစ်ရပ်ရပ်ကို ငဲ့ကွက်ပြီးခွင့်လွှတ်သင်ပုန်းချေမှုကို အထူးအရေးပေး ဖော်ပြ ထားလေသည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာပြန့်ပွားရေးအတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ လူအားလုံးကို သတ်ပစ်ရမယ် လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ကျမ်းချက်(လူသတ်ခိုင်းတဲ့ကျမ်းချက်) (၁၂၃)ချက်တောင်ပါရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာပါလိမ့်၊ စွပ်စွဲသူကိုယ်တိုင် က ကုရ်အာန်ကို စေ့စေ့ငှငှလုံးစေ့ပတ်စေ့ လေ့လာဖူးပါသလား၊ ဧကန္တတော့ အစ္စလာမ်ကိုမုန်းတီးနေတဲ့သူတွေ လုပ်ကြံဖန်တီး ထားတဲ့စာအုပ်ထဲကခိုးချတာထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၁၄၀၀)လောက်စပြီး အစ္စလာမ်က အခြားဘာသာတွေနဲ့ စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မတိုင်မီက ဘာသာ တရားတွေမှာ စစ်ဖြစ်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သမိုင်းကိုမသိဖူး၊ နားမ လည်ဖူးလို့ပဲ မှတ်ချက် ပေးရပါလိမ့်မယ်။ တမန်တော်မြတ် မပွင့်ပေါ်မီ ကတည်းကကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်မီးတွေအများကြီးတောက်လောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဂျူးတို့ရဲ့ ဂျေရုစလင်မ်မြို့ တော်ကြီး ဟာရောမရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဂရိတို့ ရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အစ္စူလာမ်သည်လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်လည်းကောင်း စနစ်တစ်ခု အပေါ်အခြေခံထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတိုင်းက မိမိတို့ဘာသာတရားရဲ့ ကောင်း မွန်တဲ့ကျင့်စဉ်၊ ကျင့်ရပ်တွေ စနစ်ဇယားတွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချပြပြီးတရားဟောပါလိမ့်မယ်။ စည်းရုံးပါလိမ့်မယ်။ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကို လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ရပ် ကိုမကောင်းပါဘူး။ မတရားပါဘူး။ Islam will dominate the whole world ဆိုပြီး Buddhism will dominate the whole world ဆိုပြီး Chustiom will dominate the whole world ဆိုပြီး အကြောက်အကန်လန့်ဖျပ်ဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ လူသားတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသားပါ။ ဘာကိုယုံကြည်လက်ခံ ရမလဲသူတို့သိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအများက ကြိုက်လို့ ကိုးကွယ် မယ် ဆိုရင်လည်း အခြားဘာသာတွေက ဘာမှမနာလို ငြူစူ ပြီး ကလိတာ၊ ထေ့ငေါ့တာလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ကိုယ့်ဘာသာတရားကို အလေးထားပြီး ချစ်မြတ်နိုး ကြမှာပါ။ ဒါကိုမှားတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မိမိနှစ်သက်လို့ မိမိယုံကြည်လို့ ကိုးကွယ်တာကိုမှားတယ်လို့ ဘယ်သူကမှ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားတွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြသူ အချင်းချင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာက အလေးထားရမယ့်ကိစ္စပါ။ အစ္စလာမ်မှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာ အခြားဘာသာဝင်တွေကို သတ်ဖို့မပြောနဲ့ “သင်တို့သူတို့ကို မကောင်းမပြောရဘူး၊ ပြက်ရယ်မပြုရ ဘူး၊ မစော်ကားရဘူး၊ ”ဆိုပြီးအတိ အလင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လက်မခံ ရင်မွတ်စလင်မ်ရဲ့စည်းဘောင်အပြင်ဖက်ကို ရောက်သွားရမယ်လို့ အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခု စွပ်စွဲ နေတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေက ဘာသာခြားတွေကိုသတ်ပြီး အစ္စလာမ် ကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် ကစိတ်ကျရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ ကယောင်ကတမ်း မြင်မက်တဲ့ အိပ်မက် တစ်ခု ပဲဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ လူသတ်ပြီး ဘာသာတရားကို စည်းရုံးချဲ့ထွင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ လူတွေကကိုယ့်လို အရူးမဟုတ်ဖူးနော်။ ကိုယ်ကသာ ကြောက် လန့်ပြီး လက်ခံချင်လက်ခံ လိုက်ဦးမှာ၊ လူတွေကကိုယ့်လို ကြောက်စိတ်ရှိချင်မှရှိမှာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဓါးကိုကြောက်လို့ ယုံကြည်ချက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ လူပျော့၊ လူညံ့တွေရဲ့အလုပ်ပါ။ အစ္စလာမ်မှာ ဓါးကိုကြောက်လို့ ယုံကြည် ချက် ပြောင်းပြီး အစ္စလာမ်ထဲဝင်လာသူတွေအတွက် နေရာမရှိပါ။ နေရာမပေးပါ။
“အစ္စလာမ် ထဲ သို့ မ၀င်ပဲငြင်းပယ်သူများကို နေရာမရွေးသတ်ကြလော့”ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို –
………. Kill the unbelievers (non – muslim) where you find them (Quran 9:5) ဆိုပြီး မှားယွင်းစွာရေးထားတာကို လည်းတွေ့ရပါတယ်။ အမှန်တကယ် ကုရ်အာန် ကျမ်းမှာပါတဲ့ အရဗီဝေါ ဟာရ က Unbelievers ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မသက်ရောက်ပါ။ ပိုဆိုးတာက non – muslim ဆိုပြီး ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဖြည့်စွက်လိုက်တဲ့ စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း ကုရ်အာန်မှာ non – muslim (မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူ – ဂိုင်းရ်မွတ်စလင်မ်) ဆိုတဲ့အရဗီဝေါဟာရလုံးဝမပါရှိပါ။ ဒါကိုက အခြား ဘာသာတွေက မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ်အမြင်မကြည်အောင်ရန်တိုက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ကုရ်အာန်(၉း၅)မှာ ပါရှိတဲ့ဝေါဟာရက “မွတ်ရ်ှရေကီးန်” (Mushrikeen) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရဗီဝေါဟာရရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က “အစ္စလာမ်ထဲသို့ မ၀င်ပဲငြင်း ပယ်နေသူများ” (non – muslim) မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများ လို့အဓိပ္ပါယ်မထွက်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်အမှန်က “အစ္စလာမ် ဖြစ်ပါလျက်နှင့် အစ္စလာမ်ကိုတုပဖျက်ဆီးသူ”လို့အဓိပ္ပါယ်ရရှိပါတယ်။ “မိစ္ဆာကောင်”တွေပေါ့၊ ကုရ်အာန်ကသူ တို့ကိုသော် လည်းကောင်း၊ သူတို့ရဲ့စနစ်ဇယား ကိုသော်လည်းကောင်း၊ တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးချေမှုန်းပစ်ဖို့ပြောနေတာပါ။ မိစ္ဆာကောင်ကိုလည် ပင်းဖက်ပြီးပေါင်းပါလို့ ဘယ်ဘာသာတရား ကညွှန်ကြားထား ပါသလဲ။ ကိုယ်နဲ့ မသက် ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကိုဘာကြောင့်များ အကြောက် လွန်နေရပါလိမ့်။ ကုရ်အာန်(၄၇း၎)ကလည်း ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ။ မိမိကိုယ်တိုင်အရဗီကိုနားမလည်ပဲ၊ ကုရ်အာန်ကိုနားမလည် ပဲအကြောက်လွန်ပြီး အိပ်ရေးတွေပျက်နေတာတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းတာက အစ္စလာမ်မဟုတ်သူတစ်ယောက်က အစ္စလာမ်တွေ ယုံကြည်တဲ့ကျမ်းချက်ပါ စကားလုံးတွေကို အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင် ဖျက်ဆီး လိုက်ခြင်းပါပဲ။ Unbelievers ဆိုပြီး non – muslim ဆိုပြီးမူရင်းကျမ်းမှာ မပါတဲ့ ၊ မူရင်းကျမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဝေါဟာရတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာနဲ့ ကြံစည်လုပ်ဆောင်ထည့် သွင်း လိုက် ပါတယ်။ ဒါကဘာသာ တရားတစ်ခုကို စော်ကားလိုက်ခြင်းပါ။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်နဲ့ လက်တွေ့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ လတ်တလောမှတင် အစ္စလာမ်မဟုတ်သူဘာသာခြားတစ်ယောက်က အစ္စလာမ်ကို စော်ကား လိုက်ပါပြီ။ ဘယ်မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်ကမှ အခြားဘာသာရဲ့ကျမ်းကို လုပ်ကြံစော်ကားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားတွေရဲ့ အဆုံးအမရှုထောင့်ကကြည့်ရင် အင်မတန်မှ အပြစ်ကြီးတဲ့ကိစ္စပါ။ အစ္စလာမ်မှာအခြားဘာသာ တရားရဲ့ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ၊ အမွေအနှစ်တွေ၊ ကျမ်းစာအုပ်တွေ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးးမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ကုရ်အာန်မှာ အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထား ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မရိုမသေမလေးမစား လုပ်ခွင့် လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားဟာ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံပါ။ အဲ့ဒီမှာ “ဗောရော ဗုဒု”စေတီ တော်ရှိပါတယ်။ လေးလေးစားစား ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာ အလွန်ခံ့ညားတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပြခန်းနဲ့ ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အမွေအနှစ်တွေရှိပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားမွတ်စလင်မ်တွေ အမြတ်တနိုးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စုကိုအရှင်ဒေါက်တာ ဥာဏိတ္တရသိပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အင်မတန်မှ ဥာဏ်တော်မြင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဆင်းတု တော်ကြီးရှိပါတယ်။ အာဖဂန်က မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဒီဆင်းတုတော်ကြီးကို နှစ်ပေါင်းများစွာမူမပျက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာ၊ ယူကျုံးမရစရာ အဖြစ် တစ်ခုကတော့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် “တာလီဘန်”တစ်စုရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြိုပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မ်နိုင်ငံ အတော်များ များက မဖျက်ဆီးဖို့အတွက် တာလီဘန်တွေကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နား တစ်ဖက်၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲပါတဲ့ တာလီဘန် တွေဟာ ဇွတ်တရွတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ သမိုင်းတစ်ခု ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ အတွက် ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ပါ။ သံဝေဂယူရမဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ရပ်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်ရှုံးလို့လူမျိုးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာ ဘာသာတရားပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာ အသိတရား မဲ့နေသူတွေရဲ့အယူအဆတစ်ရပ်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေ စစ်ရှုံးဖူးပါတယ်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို့ကြီး ကိုမွန်ဂိုတွေ ၀င်သိမ်းတဲ့အခါမှာ တစ်မြို့ လုံးမွတ်စလင်မ် အရိုးတွေတောင်လိုပုံနေခဲ့ပါတယ်။ ချောင်းတွေ၊ မြောင်းတွေထဲမှာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ သွေးတွေစီးဆင်းနေခဲ့ပါ တယ်။ အလားတူ ဂျူးလည်းစစ်ရှုံးခဲ့ ဖူးတယ်။ ခရစ်ယာန်လည်းစစ်ရှုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်လူမျိုးမှ မပျောက်သလို ဘယ်ဘာသာမှ လည်းမပျောက်ပါဘူး။ လူမျိုးပျောက်တယ်။ ဘာသာပျောက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုမြင့်တက်အောင် မကြိုး စားရင် ကိုယ်ဘာသာတရားကို ကိုယ်အလေးမထားရင် ဇာတ်တူသားစားရင် လူမျိုးပျောက်သွားမယ်။ ဘာသာလည်းပျောက် သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမကျမှု၊ မသိနားမလည်မှုတွေကို ပြုပြင်သွားမယ့်အစား အခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကိုခေါင်းပုံလွှဲချခြင်း မပြုပါနှင့်။
အစ္စလာမ်ကို ကြောက်နေကြတဲ့သူတွေက မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ဝါးမျိုခြင်းကို ဒီလိုခံလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီး လွဲမှားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထောက်ပြနေကြပြန်တယ်။
Turkey (တူရကီနိုင်ငံ) မူလက ခရစ်ယာန်နိုင်ငံ
Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား) မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ
Malaysia (မလေးရှား) မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ
Afganistan (အာဖဂန်နစ္စတန်) မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ
Parkistan (ပါကစ္စတန်) မူလက ဟိန္ဒူနိုင်ငံ
Bangladesh (ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ) မူလက ဟိန္ဒူနိုင်ငံ စသည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုကြီးပြီး လူဦးရေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေ တောင်မခံနိုင်ပဲ လူမျိုးလည်းပျောက်၊ ဘာသာလည်းပျောက် ခဲ့ရပါတယ် လို့ဝေဖန်ထောက်ပြ ထားပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြချက်တွေမှာ မှားယွင်းနေတဲ့အချက်တွေ ရာနှုန်းပြည့်ပါဝင်နေပါတယ်။ တူရကီနိုင်ငံဟာမူလက ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတို့ဟာလည်း မူလကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဆိုတာ လည်းမဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှု၊ ရိုးရာကိုးကွယ်မှုတွေက အများစုပါ။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဆိုတာလည်းမူလက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထောက်အထားမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့“ဘာမီယန်”အရပ်မှာ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအရပ်ကို ရှင်ဂေါတမရောက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့တော့ သမိုင်းမှတ်တမ်းအချို့ရှိပါတယ်။ “အာဖဂန်နစ္စတန်”ဆိုတဲ့ နာမည် ကိုက “ပဟ်လ၀ီ (Phelavi)”ဘာသာစကားဖြစ်နေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ ဟိန္ဒူနိုင်ငံတွေ မဟုတ်ပါဖူး။ ပါကစ္စ တန်ဆိုတာက “ပါးက်”ဆိုတဲ့ အူရ်ဒူစကားနဲ့ “အစ်တန်”ဆိုတဲ့ အူရ်ဒူစကားကဆင်းသက်လာတာပါ။ “သန့်ရှင်းသောနယ်မြေ”လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါ တယ်။ အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေက “ဟိန္ဒူ”တွေရဲ့ လက်အောက်မှာမနေလိုပဲ ခွဲထွက်ခဲ့တာကြောင့် “ပါကစ္စ တန်”ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ယခင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေပါ။ နောက်ပိုင်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လက်အောက်ကခွဲထွက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ယခင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေပါ။ နောက်ပိုင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလက်အောက်က ခွဲထွက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။
ဘာသာတရားတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ Holy Places တွေကိုမွတ်စလင်မ်တွေက ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာ အထောက်အထားမဲ့ပြီး ဇာတ်နာအောင် မွတ်ဆလင်မ်တွေကို ဘာသာခြားတွေက မုန်းတီးသွားအောင် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါ တယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေက ဘာသာခြားများရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာတွေကို ဖျက်ဆီး၊ မဖျက်ဆီးခြင်းထက် မွတ်စလင်မ်တို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ မက္ကာဟ်မြို့မှာတော့ ၀က်တန်ဆာကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီး လောလောဆယ်မှာပဲ ဘာသာခြားတစ်ယောက်က စော်ကားလိုက်ပါပြီ။ အဲဒီမြို့ထဲကို ဘာသာခြားတစ်ယောက်မှဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ ၀င်တာနဲ့ ခေါင်းဖြတ်ခံ ရတယ်ဆိုရင် ဒီဘာသာခြားကအထဲမှာ ၀က်တန်ဆာကိုကိုးကွယ်နေပါတယ်လို့ သူမရောက်ဖူးပဲ ဘာကြောင့်စော်ကား၊ မော်ကား ပြောရတာလဲ။ ဒါကိုက အစ္စလာမ်အပေါ်မှာ မရိုးမသားစွပ်စွဲပြောဆိုနေတာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါပြီ။
ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကမှ ဘယ်ဂျူးကမှ ဘယ်ခရစ်ယာန်ကမှ မက္ကာဟ်မြို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မက္ကာဟ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံ ခဲ့ရပါတယ်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစွန်းရောက်မွတ်စလင်မ်တွေ အကြမ်းဖက်နေတာ၊ ဗုံးခွဲနေတာ မွတ်စလင်မ်ထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အာဏာရဖို့ သူတို့ရဲ့ဒေသတွေကို သူတို့ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စ တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ “အိုစမာဘင်လာဒင်” အသတ်ခံရတာကို ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်အများစုက ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မတုံ့ပြန် ကြပါဘူး။
ကောင်းကင်ဘုံမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကာမစပ်ယှက်ဖို့ အပျိုစင်(၇၂)ယောက်နဲ့ လူပျိုပေါက်(၂၈)ယောက်ပေးထား မယ်လို့ မတော်မတရား ရေးပြထားပြန်တယ်။ အဲ့ဒီရေးသား ချက်ကို မယုံရင်ကုရ်အာန်နဲ့ အထောက်အထားပြမယ်လို့ ပြောပြီး အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာနဲ့ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ စာပိုဒ်တွေရေးပြထားတယ်။ ကုရ်အာန်ဟာ အရဗီဘာသာနဲ့ကျလာတာ ပါ။ မူရင်းကိုပြမယ်ဆိုရင် အရဗီနဲ့ရေးထား တာကိုပဲပြရမှာပါ။ ကုရ်အာန်ဟာ အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်တုံးက ဘယ်လိုရောက်ရှိလာသလဲ ဆိုတာကျွန်တော် တို့တောင်မသိပါဘူး။ အကယ်၍ ဘာသာပြန်ဆိုရင်လဲ မူရင်းအရဗီနဲ့မှန်မမှန် ပြန်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
မွတ်စလင်မ်အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီး(၄)ယောက်ယူပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကလေး(၅)ယောက် နှုန်းနဲ့ ကလေးအယောက်(၂၀)မွေးပြီးရင် မိသားစုတစ်စုမှ လူဒီလောက်အများကြီးကို အိမ်ထောင်သည်ယောက်ကျားက ဘယ်လို ကျွေးနိုင်မှာလဲ။ စဉ်းစဉ်းစားစားလဲ ပြောကြပါဦး။ ဘာကြောင့်များမွတ်စလင်မ်ကို ဒီလောက် အထင်ကြီးနေရပါလိမ့်။
တမန်တော်မြတ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာသမိုင်းမှာ အမည်နာမနှင့်တကွ အထင်အရှားမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ လက်နက်ချ အရှုံးပေးခဲ့တဲ့ ဂျူးလူမျိုး ၆၀၀ကျော်ကနေ ၉၀၀လောက်အထိကို ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဟာ ဘယ်စစ်ပွဲလဲ။ အမည်ကိုပြောနိုင်သလား။ အထောက်အထား အတိအကျရှိရဲ့လား။ တမန်တော်မြတ်က အလ္လာဟ်ဆီက အာရုံရလို့ အမျိုးသမီး တွေကိုမုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲ တာဟာ အင်မတန်မှယုတ်ညံ့တဲ့ ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ပါ။ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တစ်ယောက်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဟာ သူများဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၊ အကြီးအကဲတစ်ပါးကို ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့ ညစ်ညမ်းရိုင်းပျတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မိမစစ်၊ ဖမစစ်ဆန်စွာ စွပ်စွဲရေးသားပြောဆိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ မုဒိမ်းမှုကို ကျူးလွန်တယ်လို့သတ်မှတ် ပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူ တစ်ယောက်ဟာ မုဒိမ်းမှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုဖို့ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားပြဖို့ စွပ်စွဲသတ်မှတ် ပြောဆိုသူမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဘာသာရေးဆူပူမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာမှုကို ပျက်ပြားအောင်သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်မ တန်အကြံပက်စက်စွာ လုပ်ကြံဖန်တီးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ အသိရှိပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးပျက်စီး အောင်အကွက်ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို ဘယ်လိုမှဝင်ရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ပါတော့မယ်။ တမန်တော်မြတ်ကဇနီး(၆၁)ယောက်ယူထားတယ်ဆိုပြီး နာမည်တွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနာမည်အားလုံးကို မွတ်စလင်မ် တွေတောင်မကြားဖူးပါ။ တွေ့ကရာစာအုပ်ရဲ့နာမည်တွေ လျှောက်ရေးထားပြီး အထောက်အထားဆိုပြီး ပြပြန်တယ်။ အဲ့ဒီနာမည်တွေထဲက အချို့နာမည်တွေကို ကျွန်တော် တို့သိပါတယ်။ သူတို့တွေက တမန်တော်မြတ်ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့ ဇနီးမယားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခင်ပွန်းတွေဟာစစ်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တမန်တော်မြတ်က ကျန်ရစ်သူဇနီးမယားများ သားသမီးများကို နေရာ တစ်ခုပေးပြီး သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကို အစိုးရအဖွဲ့က အထောက် အပံ့ပေးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ စာရင်းကိုဘာမှန်း ညာမှန်းမသိပဲ တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဇနီးတွေပါလို့စွပ်စွဲလိုက်တာကတော့ သားသမီးချင်း မိဘမောင်နှမချင်းမစာနာ မထောက်ထား တတ်တဲ့ လူယုတ်မာ တစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်လုံးကဘွားကနဲပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလိုလူယုတ်မာတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီလိုအောက်တန်းကျ တဲ့လူတစ်ယောက် ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားအကျိုးပြုအင်တာနက်လောကကို အကျည်းတန်၊ အရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ အင်တာနက်ရဲ့ အကျိုးရှိမှုကို လူတွေကြောက်လန့်ပြီးအဆုံးမပြုရဲအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နဲ့လှုံ့ ဆော်ဖျက် ဆီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဆရာ ဦးစန်းအောင် ၏ ဖြေကြားချက် ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on January 19, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အမျိုးသားများနှင့် ဆင်တူရိုးမှား ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြုခြင်
အနှိပ်ခန်း နှင့် လိင်လုပ်သား အဖြစ် စေခိုင်းသူများကို အမှုဖွင့် စစ်ဆေး →